Otu Njikọ LinkedIn maka Ọganiihu Ahịa | Martech Zone
LinkedIn abụrụla ebe siri ike maka azụmaahịa na ndị na-azụ ahịa azụmaahịa na ngalaba azụmaahịa ịchọta ma jikọọ na atụmanya ha na ndị ahịa ha. Ọ bụkwa nnukwu ikpo okwu iji tinye atụmatụ gị. Ndụmọdụ anyị abụrụla maka ndị ọkachamara n'ahịa na ịre ahịa ka ịnọ ebe ndị na-ege ntị nọ… na enwere ike ịchọta ndị na-ege ntị na ya Otu Njikọ.
Otu LinkedIn dị iche iche na-enye ndị ọkachamara n'otu ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ nwee mmasị yiri nke ahụ ịkekọrịta ọdịnaya, chọta azịza, biputere ma lee ọrụ, mee kọntaktị azụmahịa, ma kwado onwe ha dị ka ndị ọkachamara ụlọ ọrụ. Nwere ike ịchọta otu iji sonyere site na iji njirimara ọchụchọ n'elu nke ebe obibi gị ma ọ bụ ịlele aro nke otu ịchọrọ. Nwekwara ike ịmepụta otu ọhụụ lebara anya n'otu isiokwu ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Ihe omuma ihe omuma a kwuputara otu ndi otu LinkedIn nwere ike isi buru ihe nzuzo gi maka oganihu ahia!
Tags: b2bazụmahịa na azụmahịaLinkedInjikọrọ ọnụ
Feb 24, 2014 na 5:11 PM
Akwa post Doug, You tinye ọnụ nnukwu [infographic]. Otu ebe m na-ele anya bụ ngalaba ọnọdụ. Ebee ka ebe ahụ dị?
Nnukwu Blog ,,, jikọtara-na-ekere òkè dị mkpa n'inwe mmekọrịta n'etiti ndị ahịa na otu mkparịta ụka n'akụkụ dị iche iche.
Kwere na gi..meputara ndu bu ihe di nkpa nye ndi isi n’ileko ahia ma obu mmepe ga-enyere ha aka otutu ihe anyi nwere ike inweta ndi okacha-amara di iche-iche ha na ha ikwurita okwu ma kwalite ngwa ahia.